#1 Xayiraadaha Timaha Wareegga Dabiiciga ah: Ka iibso Kinky Curly Hair
Tayada Kinky Curly Hair Remings Haweenka Midabka
Ku Soo Dhawow Qodobbada Xayawaanka Timid, dhammaan xirmooyinka, qoob-ka-ciyaarka & foorjoogyada ayaa loogu talagalay isticmaalka dheeraadka ah inta lagu hayo cufnaanta culus si loo hubiyo buuxda. Kadib toban sano ka dib bixinta haweenka midabka midabka, waxay noqotaa hadafkayaga aan ku heleyno qiimo-dhimista iyada oo aan ka dhicin dhumucda timo kasta.
Kinky toos ah
MNHE waxay maraakiibta kumanaan kor u qaadaysaa timaha dabiiciga ah haweenka dunida oo idil, oo si wadajir ah u waafaqsan laba arrimood. Waxay rabaan xirmooyinka ugu fiican iyo adeegga macaamiisha tayo sare leh shirkad iyaga taageera marxaladaha kobaca. Waxaanu u adeegsanaynaa nooca 3 iyo qor timaha 4 textures.
Saameynta Taabashada Tayada Timaha ee Timaha
Waxaa jira siyaabo badan oo aad u leexan kartid isla markaana u cusbooneysiin lahayd cusbooneysiin aad u baahsan si aad u eegto timaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Ku rakibista xarumaha caafimaadka leh, waxaad isla markiiba u sheegi kartaa wax-qabadkiinada adoo leh qalabka tayo-qabadka, dhamaan koodhannadeenu waa cayaar qumman oo loogu talagalay timaha jilicsan. Waxyaabahaasi waa hubaal inaad ka tagto adigoo dareemaya cajiib ah maaddaama ay ku darayso mugga quruxda badan ee muggaaga. Waan ku faraxsanahay inaan ku bilowno safarkaaga; Dhammaan curyaamyadeennu waxay kugula macaamilaan maskaxda! Sidaa daraadeed waxay bixisaa alaabooyin noocyo kala duwan leh waxayna u egyihiin in ay kugu habboon yihiin. U hubso inaad ku biirtid Naadiga VIP si aad wax uga baratid dhammaan waxyaabaha cusub iyo cusbooneysiinta.
Our Afargeecada afro-kinky waxaa loogu talagalay dumarka midabka leh. Tilmaamku waa nooc adag oo qotodheer leh oo 4 ah. Xirmooyinkeena iyo kareemayaasha, daahyada iyo xirmooyinka ayaa buuxa oo hubiya in la riyaaqo.
Inta badan Afrikaan Maraykan ah oo isticmaala sawirrada naga sameynta nadiifinta muraayadaha hadda jira. Nidaamkani wuxuu ku xiran yahay xirmooyinkeenna ayaa ah mid raaxo leh oo kufiican dhammaan marxaladaha. Ma aha oo kaliya alaabtayadu waa tayada ugu sareysa ee ay mudada dheer socoto, laakiin waxaan sidoo kale macaamiishayada Instagram u sheegnay inay haysteen lixda xidhmo ee sannadka. Isticmaalkeena noocyadeena, dabcan, waxay ku guuleysteen tan.
Macaamiishayadu waxay noo sheegeen in ay ku arkeen si sahlan oo ay ugu kortaan timahooda dabiiciga ah iyagoo isticmaalaya ballaarin. Socdaalka xoojinta timahaaga oo eegaya riwaayad waa nidaam. Taasina waa sababta ay MNHE halkan u tahay hadafkeena ah inaan ka caawino macaamiisheena inay eegaan oo ay dareemaan qurux.
Waxaan ognahay in aan soo iibinno xirmooyinka ugu fiican adduunka sababtoo ah macaamiisheena waxay ka dalbanayaan adduunka oo idil. Meel kasta oo ay tahay gabadhu waa ciddii rabta in ay eegto dhameysatay curry qurux badan oo dabiiciga ah oo cajiib ah, waxaad hubsan kartaa in ay isticmaashay badeecad aan kaydinayno. Waa tan ugu caansan ee tayo sare leh timo jilicsan karkey iyo adeegga macaamiisha online.
Waxay u ekaaneysaa in ay timo badan tahay Cirbadaha ku wareegsan wajigaaga markaad isticmaasho xayawaan-kicin-ku-fidinta timaha. Waxay ku yimaadaan dherer iyo kala duwanaansho kala duwan.
Iibsashada kareebaha oo awood u yeesha timo dabiiciga ah oo leh wakhti dheerad ah ayaa ka dhigaysa qaab dhammaystiran oo dhameystiran. Waxaan bixinnaa dhamaystirka dhammaystirka nuxurka, dhererka, iyo noocyada kala duwan ee aad rabto. Isticmaalida kareemka si aad u xajisid wejiga sii kordhaya ee gooyo, ama marxaladda qallafsan ee ka gudubka timaha toosan ilaa kobaca dabiiciga ah ayaa la sameeyaa si aad u sahlan. Timaha dabiiciga ah ayaa sidoo kale u oggolaanaya timaha in ay si sahlan u habeeyaan siyaabo kala duwan. Ponytails, up-dos, iyo xayeysiisyada ayaa sidoo kale ah baayacmushyada laga bixiyo bogga internetka. Clip-ins waa habka ugu fiican ee lagu bedeli karo timahaaga iyada oo aan waxyeellayn xaaladda xaalada adag ee timahaaga dhabta ah. Haysashada xakamayntaada Xayawaanka timaha leh ee xayawaanka ah dib u jiido ama toosiso maalin kasta si aad u ilaaliso muuqaalka aad rabto waxay keeni kartaa timo xumo ama waxyeello. Markaad isticmaasho kareemada jilicsan, waxaad u eegi kartaa cajiib ah oo aad ka ilaalin kartaa lafahaaga ka soo jiidashada maalin walba iyo jeexa taas oo sababi karta in ay noqoto mid aan caadi ahayn.
Waxaanu u Caawinaynaa Dhamaan Dharka Madada Qurxan
Sidaas darteed haddii aad haysato 4A, 4B, 4C ka dibna waanu daboolnaa. Waxaan fahamsanahay dhibaatooyinka badan ee haysta weelka ugu fiican, tixgelinta sahaminta dokumintiyadayada, markaa fiiri wixii kugu habboon. MNHE waa 100% macaamil madow oo la adeegsado oo hadda macaamiisha u adeega in ka badan dalalka 100 aduunka oo dhan macaamiisheena caalamiga ah.
MNHE waxay diiradda saareysaa haweenka midabka midabka midabkeedu u egyahay xirmooyinka ay ka mid yihiin 10 ", 12" 14 ", 16", 18 "20" 22 ", 24" 26 "28" 30 "oo fududeyneysa qaabka. Mudanayaal ayaa sheegay in ay arkeen in alaabtayadu ay yihiin kaliya waxa ay u baahan yihiin in la dilo! Fiiri buuggan cusub ee caanjug cusub, "Xaqiiqda ku saabsan timaha jilicsan. "
MNHE Live Instagram Feed Live
@jastanae 😍😍😍 quruxda waa magaceeda !!! ·
Isku day inaad sidan oo kale ahaato xagaaga oo dhan '19 LOL 😝 ...
Hahahahaha !!! Repost @campuslately · · · · 😂
Divas iyo curisku waxay joojiyaan inay timahaaga madow kaaga dhintaan. Embrace ...
Aniga mar walba LOL. Runtii waa inaan ka baxaa tha ...
Waxaan kudhoweynaa badhka 2019. Xusuusnow ...
Waa maxay fikradahaaga? Miyuu sax yahay mise waa qalad?
Miyey weli sameeyaan sidan oo kale?
Ku biir Club VIP at #mynaturalhairextensions To ...